« Tongava, ry Tompo tsara fo ! » il y a 34 minutes
Ny rehetra no mila mandray andraikitra il y a 3 heures
Vokatra Faritany Toamasina
Navoakan'ny Ceni tamin'ny fomba ofisialy ny asabotsy 9 janoary teo ny vokatry ny fifidianana loholona. Indro ny vokatry teo amin'ny faritany Toamasina.
Vokatra Faritany Fianarantsoa
recuillis par RRJ il y a 5 années
Navoakan'ny Ceni tamin'ny fomba ofisialy ny asabotsy 9 janoary teo ny vokatry ny fifidianana loholona. Indro ny vokatry teo amin'ny faritany Fianarantsoa.
Vokatra Faritany Antsiranana
Navoakan'ny Ceni tamin'ny fomba ofisialy ny asabotsy 9 janoary teo ny vokatry ny fifidianana loholona. Indro ny vokatry teo amin'ny faritany Antsiranana.